အကယ်ဒမီရွှေစင်ရုပ်ထု သုံးဆုကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ပရိသတ်ရဲ့အချစ်တော်ဖွေးဖွေးကတော့ လက်ရှိအောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ ကြယ်တစ်ပွင့်ပါ။Brand Ambassador အဖြစ်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လက်တွဲပြီး လုပ်ဆောင်နေသလို အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့မအားလပ်သူတစ်ယောက်ပါ။ဖွေးဖွေးကတော့ ဒီနေ့မှာနာမည်ကျော်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုရဲ့ လူလည်ကျမှုတစ်ခုကို အများသိအောင်ဖော်ထုတ်ခဲ့တာပါ။
အဲ့ဒါကတော့ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်တော်တော်များများအသုံးပြုနေတဲ့ Application တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံအခြေစိုက် iflix ကုမ္ပဏီကနေ အကြွေးရရှိရန်ကျန်နေတဲ့အကြောင်းကို သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမှာမျှဝေခဲ့တာပါ။ “Dear iflix! For the Debts you have to give me…you are still on my mind… Don’t you think I m done with u coz I’m on my vacation” ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စာသားလေးနဲ့အတူ “ဘယ်တော့မှ ကိုယ်ကြောင့်လူတွေကို စိတ်ဒုက္ခမပေးချင်ဘူး… မထင်ထားတဲ့လူတွေက အဲ့လိုလုပ်တတ်တာလား… ဒါပေမယ့် ကိုယ်မှန်ရင်တော့ ခေါင်းငုံ့ခံနေလို့လည်း မရပြန်ဘူး..မြန်မာပြည်ကလူတွေကို အဲ့လိုလာလုပ်လို့ ရတာလားဟင်?” လို့ရေးသားပြီး မျှဝေခဲ့တာပါ။
ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း စိတ်ပူနေကြမယ့်ပရိသတ်ကြီးအတွက် “ချစ် Darlings လေးတွေစိတ်မပူနဲ့နော် …iflix ကကျွန်မအပါအဝင် မြန်မာပြည်က အနုပညာရှင်အများစုကို ထိုက်သင့်တဲ့ စာချုပ်ကအတိုင်း အနုပညာကြေးများ မပေးချေသွားပါဘူး.. အမှန်တရားတစ်ခု ပြောသင့်ပြောပြထိုက်တာတစ်ခုကို ပြောပြအသိပေးရုံပါ…ဖွေး ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး စိတ်ထားတတ်ပြီးသားပါ… သူ့တန်ဖိုးသူသတ်မှတ်တာပါ…
ကိုယ်လဲကိုယ့်တန်ဖိုးနဲ့ကိုယ်ပါပဲ…အေးဆေး… တခြားမှန်ကန်ရိုးသားသူတွေနဲ့ အလုပ်တဝကြီးဆက်လုပ်ရဦးမှာမို့…မြန်မာပြည်မှာ နောက်ထပ် အဲ့လိုနိုင်ငံခြား company တွေလူလည်လာမကျနိုင်ဖို့ မြန်မာအချင်းချင်းတော့ စည်းလုံးဖို့လိုပါမယ်… ကိုယ့်ကို ကြားက ဆက်သွယ်အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ iflix ကဘယ်မြန်မာကိုမှလည်း နာမည်တတ်မပြောချင်တော့ပါဘူး” လို့အားပေးသူပရိသတ်ကြီးစိုးရိမ်နေမှာစိုးလို့ ထပ်မံရေးသားခဲ့ပါသေးတယ်။
အကယျဒမီရှစေငျရုပျထု သုံးဆုကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ပရိသတျရဲ့အခဈြတျောဖှေးဖှေးကတော့ လကျရှိအောငျမွငျကြျောကွားနတေဲ့ ကွယျတဈပှငျ့ပါ။Brand Ambassador အဖွဈကုမ်ပဏီတှနေဲ့လကျတှဲပွီး လုပျဆောငျနသေလို အနုပညာအလုပျတှနေဲ့မအားလပျသူတဈယောကျပါ။ဖှေးဖှေးကတော့ ဒီနမှေ့ာနာမညျကြျောကုမ်ပဏီကွီးတဈခုရဲ့ လူလညျကမြှုတဈခုကို အမြားသိအောငျဖျောထုတျခဲ့တာပါ။
အဲ့ဒါကတော့ လကျရှိမွနျမာနိုငျငံမှာ ရုပျရှငျခဈြပရိသတျတျောတျောမြားမြားအသုံးပွုနတေဲ့ Application တဈခုဖွဈတဲ့ မလေးရှားနိုငျငံအခွစေိုကျ iflix ကုမ်ပဏီကနေ အကွှေးရရှိရနျကနျြနတေဲ့အကွောငျးကို သူ့ရဲ့ဖဘှေ့တျချစာမကျြနှာမှာမြှဝခေဲ့တာပါ။ “Dear iflix! For the Debts you have to give me…you are still on my mind… Don’t you think I m done with u coz I’m on my vacation” ဆိုတဲ့အင်ျဂလိပျစာသားလေးနဲ့အတူ “ဘယျတော့မှ ကိုယျကွောငျ့လူတှကေို စိတျဒုက်ခမပေးခငျြဘူး… မထငျထားတဲ့လူတှကေ အဲ့လိုလုပျတတျတာလား… ဒါပမေယျ့ ကိုယျမှနျရငျတော့ ခေါငျးငုံ့ခံနလေို့လညျး မရပွနျဘူး..မွနျမာပွညျကလူတှကေို အဲ့လိုလာလုပျလို့ ရတာလားဟငျ?” လို့ရေးသားပွီး မြှဝခေဲ့တာပါ။
ဆကျလကျပွီးတော့လညျး စိတျပူနကွေမယျ့ပရိသတျကွီးအတှကျ “ခဈြ Darlings လေးတှစေိတျမပူနဲ့နျော …iflix ကကြှနျမအပါအဝငျ မွနျမာပွညျက အနုပညာရှငျအမြားစုကို ထိုကျသငျ့တဲ့ စာခြုပျကအတိုငျး အနုပညာကွေးမြား မပေးခသြှေားပါဘူး.. အမှနျတရားတဈခု ပွောသငျ့ပွောပွထိုကျတာတဈခုကို ပွောပွအသိပေးရုံပါ…ဖှေး ဘာမှမဖွဈပါဘူး စိတျထားတတျပွီးသားပါ… သူ့တနျဖိုးသူသတျမှတျတာပါ…
ကိုယျလဲကိုယျ့တနျဖိုးနဲ့ကိုယျပါပဲ…အေးဆေး… တခွားမှနျကနျရိုးသားသူတှနေဲ့ အလုပျတဝကွီးဆကျလုပျရဦးမှာမို့…မွနျမာပွညျမှာ နောကျထပျ အဲ့လိုနိုငျငံခွား company တှလေူလညျလာမကနြိုငျဖို့ မွနျမာအခငျြးခငျြးတော့ စညျးလုံးဖို့လိုပါမယျ… ကိုယျ့ကို ကွားက ဆကျသှယျအလုပျလုပျခဲ့တဲ့ iflix ကဘယျမွနျမာကိုမှလညျး နာမညျတတျမပွောခငျြတော့ပါဘူး” လို့အားပေးသူပရိသတျကွီးစိုးရိမျနမှောစိုးလို့ ထပျမံရေးသားခဲ့ပါသေးတယျ။
ဖှေးဖှေးကတော့ နိုငျငံခွားကုမ်ပဏီတှေ နောကျတဈခါမွနျမာနိုငျငံကို ထပျပွီးလူလညျကလြို့မရအောငျ အခငျြးခငျြးစညျးလုံးနိုငျဖို့အတှကျ သူကိုယျတိုငျကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ အတှအေ့ကွုံကိုမြှဝပေေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဖိုးသား နှင့် ချစ်စနိုးဦးတို့ရဲ့စုလျားရစ်ပတ်ထိမ်းမြားမင်္ဂလာပွဲတွင် အခါတော်ပေးသီဆိုခဲ့တဲ့ အဆိုတော်ရန်အောင်
ဖွေးဖွေးနဲ့အတူ သရုပ်ဆောင်ရတော့မယ့် ဖြူဖြူထွေး
“နှင်းဆီလှေ” အငြိမ့်သဘင်ကျင်းပဖို့ လူစုံတက်စုံတိုင်ပင်နေကြတဲ့ နှင်းဆီအဖွဲ့သားများ